ओली किन बैठकमा बस्न चाहेनन् ? - Deshko News Deshko News ओली किन बैठकमा बस्न चाहेनन् ? - Deshko News
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा गत बुधबार महासचिव विष्णु पौडेलले एजेन्डा प्रस्तुत गरेपछि सदस्यहरूबाट पालैपालो विरोध भयो । एजेन्डामा चित्त नबुझाउने नेताहरूले बैठक कक्षका फरक–फरक ठाउँबाट उठेर विरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार त्यस दिन असन्तुष्ट खेमाका नेताहरूको बसाइ योजनाबद्धजस्तो देखिन्थ्यो । ‘एक जना यहाँ, एक जना त्यहाँ, एक जना ऊ पर बसेको छ, छुट्टाछुट्टै बसे पनि सबैको एउटै स्वर छ,’ ती नेताले भने ।
बैठक आफूअनुकूल नभएपछि प्रधानमन्त्री उठेर हिँडेको यो पहिलोपटक भने होइन । गत वैशाख २४ गते स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्न बसेको सचिवालय बैठकमा पनि ओली ‘म थाकें’ भन्दै छोडेर हिँडेका थिए । त्यो दिन पनि उनी बैठकबाट गएपछि बुद्धजयन्तीको अवसर पारेर भिडियो सन्देश रेकर्ड गराएका थिए । ‘उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ, बिरामी मान्छेका बारेमा त्यति धेरै प्रतिक्रिया दिनु उपयुक्त होइन,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर बोल्न जत्ति पनि सक्ने, सुन्ने बेला बिरामी भइहाल्ने कुरा संयोग मात्रै नहुन पनि सक्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट